Immisa kalluun ayaa lagu ridi karaa quraaradda quraaradda? | Kalluunka
Immisa kalluun ayaa lagu ridi karaa quraaradda quraaradda?
Jarmal Portillo | | DIY Aquariums
Mid ka mid ah su'aalaha aasaasiga ah ee ay weydiiyaan dhammaan kuwa doonaya inay ka bilaabaan adduunka aquariums waa meeqa kaluun ayaa lagu ridi karaa quraaradda quraaradda. Waxaa jira tixraacyo badan oo kuxiran nooca ka soo baxa iyo aquarium-ka aad haysato. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu xisaabtamo astaamo gaar ah oo quraaradda iyo qaybaha intiisa kale ay waajib ku tahay inay buuxiyaan si kalluunku ugu noolaado hab caafimaad leh iyo waxa ugu dhow nidaamkooda dabiiciga.
Sidaa darteed, qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u ogaato inta kalluun ee lagu ridi karo quraaradda.
1 Immisa kalluun ayaa lagu ridi karaa quraaradda quraaradda ah
2 Intee in le’eg buu u baahan yahay kalluun kasta
3 Immisa kalluun ayaa lagu ridi karaa aquarium-ka kulaylaha ama biyaha qabow
Immisa kalluun ayaa lagu ridi karaa quraaradda quraaradda ah
Xeer aasaasi ah oo u adeegi kara tixraac si loo ogaado inta kalluun ee lagu ridi karo aquarium-ka waa 1 litir centimitir kalluunka qaangaarka ah. Kalluunku waa inuu si raaxo leh ugu noolaadaa iyadoo ay weheliso daryeel yar, kuwaas oo ay ka mid yihiin, meel bannaan ku filan.
Markay tahay ogaanshaha inta kalluun ee aan ku ridi karno quraaradda, nooca taangiyada ayaa saameyn ku leh. Mid balaaran oo gacmeed ayaa lagula talinayaa halkii mid qoto dheer oo cidhiidhi ah, maxaa yeelay inta badan biyaha dusha sare u leh hawada, ayaa sii weynaanaya isdhaafsiga gaaska ee biyaha, waxaa jiri doona oksijiin badan waxayna awood u yeelan doontaa inay sii xajiso kalluunka.
Buuxdhaafka ku jira aquarium-ka laguma talinayo, in kasta oo la rumeysan yahay in, inta kalluunku si xor ah u dhaqaaqi karo, aysan waxba dhicin. Kuma haboona maxaa yeelay kalluunka wuu culeys dareemi karaa wuxuuna dhaawici karaa caafimaadka dadka degan. Intaa waxaa dheer, noocyada kalluunka waa in la tixgeliyaa maxaa yeelay qaar badani waa dhul-badeed mana rabaan inay ka quustaan ​​meelihii ay ku noolaayeen.
Kalluun kasta wuxuu u baahan yahay booskiisa. Tirada dadka oo badan waxay na siin doontaa dhibaatooyin badan dhexdoodana waxay noqon doontaa dagaal joogto ah maxaa yeelay dhibaatooyinka u dhexeeya waxay noqon doonaan kuwo joogto ah: dagaallada, nibbinta baalalka iyo cunnida dadka, iyo wixii ka sarreeya, dhibaatooyinka biyaha, sifeynta iyo tayada nidaamka deegaanka.
Tusaale aquarium-ka guriga:
Guud ahaan waxaa jira aquarium 60 cm dheer, 30 ballaaran oo 30 qoto dheer. 15 kalluun biyo macaan oo 5 cm ah ayaa si raaxo leh ugu dhex noolaan kara. Tusaalahan tusmada aquarium ka duwan ayaa lagu sameysan karaa iyadoo la xisaabinayo hal litir oo biyo ah sentimitir kalluun ah. Kalluunka biyaha macaan waxay u baahan yihiin biyo ka yar halkii kalluun marka loo eego kalluunka biyaha cusbada ku jira, maaddaama howsha oksijiintu ay gaabis tahay Waa in lagu xisaabtamo in kalluunku korayo oo xisaabinta loo fulinayo sidii kalluun weyn.
Intee in le’eg buu u baahan yahay kalluun kasta
Arrin muhiim ah oo ah in laga fiirsado ayaa ah inta kalluun kasta u baahan yahay. Xeerka hal litir oo biyo ah sentimitir kasta maadaama ay inta badan tixraacaan cichlids laakiin had iyo jeer way noo shaqaysaa. Haddii aan rabno aquarium-ka lagu beeray dhir dhab ah ama aan haysanno noocyo kale oo kalluun ah sida koi carp iyo kalluunka dahabku waa waa inaad heysataa biyo badan maadaama ay wasakh badan yihiin. Xaaladahan oo kale, 10 litir oo biyo ah ayaa lagula talinayaa centimitir kasta oo kalluun ah. Noocyadan kala duwan ee kalluunka ah ee wax badan soo baxa oo wasakh badan dareema, dhinacan waa in lagu xisaabtamo.
Sidoo kale waa inaad xusuusataa faahfaahin kale oo xiiso leh si aad u ogaato inta kalluun ee lagu ridi karo quraaradda. Mid ka mid ah waa gardarrada ama dhulalnimada kalluunka. Waxaa jira kalluun dhulal badan leh sidaa darteed waxay u baahan yihiin boos u gaar ah oo ay ku xukumaan. Kalluunkani wuxuu u muuqdaa mid culeys badan dareemaya haddii ay la nool yihiin kalluun kale waana inay isla degaan wadaagaan. Gaar ahaan markay tahay sameynta lamaane ama ilmo dhala, waxay noqdaan kuwo dagaal badan. Halkani waa meesha ay tahay inaan ku darno biyo badan oo aan helno meel ballaadhan haddii aan rabno inaan kalluun badan keydinno.
Noocyo badan oo ka mid ah noocyada ayaa xoog leh waxayna jecel yihiin inay go'aamiyaan booskooda ku dhex yaal quraaradda dhexdeeda. Sidaa darteed, haddii aquarium-keena uu leeyahay tiro badan oo kalluunka noocan ah ah, waxaan awoodi doonnaa inaan guryo ka dhigno shaqsiyaad yar. Soo koobid ahaan, waxaan sameyn karnaa tilmaamo waawayn oo aan ku ogaan karno xaaladaha waaweyn ee go'aaminaya inta kalluun ee aan ku ridi karno quraaradda:
Qaddarka qashinka: nooc kasta oo kalluun ahi wuxuu soo saaraa qashin cayiman oo ay tahay in lagu xisaabtamo booska quraaradda. Qaddarka badan ee qashinka ay soo saaraan, ayaa ka hooseeya tirada kalluunka aquarium-ka ay hayn karto.
Cabirka ay ku yeelan doonaan qaangaarka: Waxaa jira noocyo badan oo aad u weynaada marka loo eego cabirkooda markay yar yihiin. Mid ka mid ah qaladaadka waaweyn ee cusub ee dunidan ku cusubi ma aha inay ka fekeraan sida xayawaanka dhaadheer ay u helayaan markay qaan gaadhaan.
Heerka dhalmada: mid ka mid ah kalluunka sida aadka ah loogu iibiyo aquarium-biyoodka macaan waa Poecillids. Noocani wuxuu leeyahay awood si cadaalad ah loo horumariyey si uu u tarmo. Waa halkan halka ay lagama maarmaanka u tahay in la falanqeeyo tirada kalluunka si loo yiraahdo way ku kordhin karaan.
Tirada ragga iyo dumarka: Markaad kalluunka u dhex gelineyso quraaradda, waxaa lagama maarmaan ah in la tiriyo inta lab iyo dhedig ee aan soo bandhigno. Tani waxay sidoo kale saameyn ku leedahay heerka dhalmada.
Xisaabi tirada kalluunka ku habboon: halkan waxaan u isticmaali karnaa qaanuunka madaniga ah ee litir biyo ah sentimitir kasta oo kalluun ah. Kaliya waa inaad tiraahdaa quraaradda quraaradda dhexdeeda waxaa ku badan kalluunka iyo biyaha oo keliya. Waana hubaal inaan haysanno dhir, qurxin, miirayaal, iwm. Tani waxay muujineysaa in mugga waxtarka leh ee taangigu uu yaraan doono.
Immisa kalluun ayaa lagu ridi karaa aquarium-ka kulaylaha ama biyaha qabow
Muuqaal muhiim ah oo la tixgelinayo waa nooca aquarium-ka aan yeelan doonno. Haddii noocyadu yihiin kulayl ama biyo qabow waxay yeelan doonaan baahiyo kala duwan. Gaasaska si isdaba joog ah ayaa loogu beddelaa dusha sare ee aquarium-ka. Aquarium-ka wuxuu sii daayaa kaarboon laba ogsaydhka iyo oksijiin ku jirta hawada Waa lagama maarmaan si ay ugu dambayn ugu milmaan biyaha kalluunka si uu ugu dul noolaado. Mid ka mid ah xeerarka lagu ogaanayo inta kalluun ee lagu dhex ridi karo aquarium-ka waa in la xisaabiyo dusha sare ee biyaha si loo ogaado xaddiga kalluunka aan yeelan karno. Dusha sare ee biyaha waxaa lagu xisaabiyaa iyadoo lagu saleynayo gaasaska la isweydaarsanayo oo ay ahayd inuu ahaado kaarboon oksijiin leh banaanka.
Sharcigani wuxuu noo sheegayaa inaanu qaadi karno hal sentimitir kalluun 12kii cm oo dusha ah. Sidan oo kale waxaan dhihi karnaa kalluunka biyaha qabow waxaan leenahay 62 sentimitir oo isku wareeg ah sentimitir kasta oo kalluun ah. Dhinaca kale, kalluunka kuleylaha waxaan leenahay 26 sentimitir laba jibbaaran sentimitir kasta oo kalluun ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan inta kalluun ee lagu ridi karo aquarium-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » DIY Aquariums » Immisa kalluun ayaa lagu ridi karaa quraaradda quraaradda?